China fekitori yakananga kugovera bhora Joint-Z12069 vagadziri uye vanotengesa | TANGRUI
Fekitori Yakajeka Inopa Bhora Yakabatana-Z12069
Miviri yedu yakaumbwa nezvakawanda majoini. Iwo majoini anotibatsira kufamba zvakanyanya zvine simba uye nenzira inoshanduka, uye kufamba uku kunodzora kukanganisa. Bhora rakabatana rakafanana nekubatana kwekumiswa kwemotokari. Batanidza pakati pesimba rekudzora uye knuckle.
Kudzora mota, zvinotarisirwa kuti mavhiri epamberi anogona kutenderedzwa nenzira yaunoda. Imwe michina yekufambisa inoshandiswa kunyatso tenderedza mavhiri, uye bhora rinotakura rinoshandiswa kubatanidza iyo rotary cam kune lever. Iko kushandiswa kweiyo bhora mubatanidzwa weiyo mafuru inobvumira iyo hub musangano kutenderera nezve yayo axis uye panguva imwechete kuti ive neyakagadziriswa kubatana neane levers, iyo yakakosha kwazvo mukushanda kwekumiswa.
Maumbirwo ebhora rakabatana.
Matemba ebhora anotsigira ndeemhando dzakasiyana, asi chimiro uye musimboti webasa ravo zvakafanana. Ose ari maviri epamusoro uye epazasi mabara mabhegi ane: chigunwe chine tambo (kana groove) uye mubatanidzwa webhora, imba, polymer clutch, washer yekunamatira uye chifukidziro. Zvakare, izvo zvinotsigira ndezverudzi rwunodonha uye rwusingapatsanurike. Pakutanga, kazhinji kugadzirisa mabhora ebara kwaiitwa, kwaisanganisira kutsiva chinhu chepurasitiki. Kugadziriswa kwakadai kwakadzosera kutsigirwa kweyaimbove diki yekufamba. Asi, iyi nzira yekudzoreredza haina kudzosera kuvimbika kwekutanga kwebhora michina, nekuti iyo polymer element yakatsiviwa, uye chigunwe chakaramba chakasakara, uye panguva yekushanda kwenguva refu kweiyi hinji, inogona kuumba madiki madiki anogona kutungamira mukuparadzwa kwe simbi uye gadzira mamiriro ekukurumidzira mumugwagwa. Yemazuva ano bhora mabheyaringi emota, zvese zvishoma kazhinji zvinogadzirwa nekushandisa kweinowira chimiro, uye mushure mekundikana, ivo vanofanirwa kutsiviwa. Uye chii chekutenga, yepamusoro uye yepasi bhora mabheyaringi ane fasteners pamutengo wekutenga, online chitoro che auto auto chitoro "Tangrui" ichakubatsira iwe, pairi pane yakafara assortment yezvose zvinodiwa zvikamu zvekushandisa uye maturusi pamitengo inoyevedza. Kuti utsive mabara akatakurwa pamotokari dzeLada nepamberi, kumashure kana nemavhiri ese, iwe unofanirwa kutaura nevashandi, nzvimbo yebasa, kana kana uine chishuwo uye zvimwe zvishandiso, unogona kugadzirisa zvese iwe pachako.
Nekuiswa kwejojo ​​yebhora, iyo mota yekumisa unit ine akasiyana mafambiro. Mubatanidzwa webhora unoshanda kuitira kuti zvikamu zvekumiswa zvigone kufamba nenzira dzakasiyana, kwete chete mune imwe nzira. Aya mafambiro anoparadzira kukanganisa pamotokari.
■ Kurapa Kwakasimba kweSurface
Tangrui ine eleTangruio deposition kupfeka yakafanana neiyo OE nhanho yekudzivirira ngura kudzikisira kugadzikana.
■ Chigaro chepurasitiki
Tangrui anoshandisa chigaro chepurasitiki chebhora. Kukuvara kwekudzikira kwakaderera uye kushomeka kwakaderera mu torque uye clearance kunogona kuchengetedza mashandiro akareba.
■ Yakaomarara & Nyoro Bhora Stud
Tangrui inoderedza kusanzwisisika kwepamusoro pebhora kuburikidza neyakaipisa maitiro, ichiita kuti bhora ritsvedzerere.
Iyo zvakare ine simba rakakwira nekuisa kabhoni simbi, kupisa kupisa, uye kutonhora kuumba.
Type Mapfundo ebhora
OEM Kwete. 1603545 1603544
Chitupa IS016949 / IATF16949
Pashure: TangRui Oem Bhora Rakabatana PAMUSORO-Z12068
Zvadaro: Pamberi Pazasi Rearward Kudzora Arm YeBENZ-Z5130
Yakaomarara Bhora Yakabatana
Tire Bhora Rakabatana
Tevera Rod Rod Bhora
Auto Parts Kudzora Arm Ball Joint YeNISSAN-Z1 ...
Hunhu Guarantee Yekunze Bhora Yakabatana-Z12054
China Factory Kupa Suspension Zvikamu Bhora Joinha ...
China fekitari Car Suspension Part Ball Joint- Z ...
Shock Inotora Bolt, Hood Shock Inotora, Tire Bhora Rakabatana, Mberi Kudhiraivha Gonhi, Wheel Hub, Shock Yekupinza Rubber,